qalabka gudaha iyo dibadda - Shiinaha Gormeet caaga
Qaybtan waxaa ku jira jab waxyaabaha un-qaybsanyihiin moldings, sida: Qolka Kaydinta Tani si sahlan loo shirin Hoosada kaydinta bannaanka laga saari karo meel kasta oo Backyard ama sagxad halkaas oo loo baahan yahay kaydinta. The Hoosada kaydinta beerta dibadda leeyahay saqaf sloped. Dhammaataan si loogu kaydsado qalabka cawska, qalabka isboortiga, iyo alaabta deyrka, Hoosada tani waa wejiyo badan oo waara. Salaaxid waxyaabaha From weliba qolalkii hoose la qaadan karo in ay guryo eey banaanka weyn, waxaan leenahay ku rakibida lagama maarmaanka ah iyo accessories si fiican loo waafajiyo aad perso ...
Qaybtan waxaa ku jira jab waxyaabaha moldings un-kala qaybsanyihiin, sida:
Tani Hoosada kaydinta bannaanka si sahlan loo shirin waxaa lagu qori karaa meel kasta oo Backyard ama sagxad halkaas oo loo baahan yahay kaydinta. The Hoosada kaydinta beerta dibadda leeyahay saqaf sloped. Dhammaataan si loogu kaydsado qalabka cawska, qalabka isboortiga, iyo alaabta deyrka, Hoosada tani waa wejiyo badan oo waara.
From weliba qolalkii hoose la qaadan karo in ay guryo eey banaanka weyn, waxaan leenahay ku rakibida lagama maarmaanka ah iyo accessories si fiican loo waafajiyo baahidaada shakhsi ahaaneed, xajmiga iyo cimilada ee deyrkaaga. No arrinta noocee ah xayawaanka aad haysato, qaab kasta oo uu leeyahay noocyo kala duwan oo tirada, si aad u dooran kartaa guri ku haboon waaweyn ama yar yar eey aad xayawaanka.
The cusub Butros Gear Tallaabada iyo Ramp bixisaa xayawaanka jiirada a tur in wax fudud si ay u gaaraan sooffa, sariiraha, iyo in ka badan. Waxaa la sameeyey caag raagaya doorsoon iyo yimaado fursadaha midab la xusho. rooga waa saari karo oo waa mashiinka la dhaqi karo. Ka go'an in ay raaxada iyo amaanka ee xayawaankaaga guriga, loo hagaajiyo tayada nolosha adiga iyo saaxiibada aad afar-lugood iyadoo la kaashanayo Butros Gear.
Sida xabadka baraf ah, daboolida double-saareen alwaaxdii saqafka haysay abuuro ningax ka xoogbadan. Waxaad astaysto size, midabka, oo dhumucdiisuna waxay of meeldhexaadka ah.
Cabitaanka ilihii qaybo ka mid caag ah, albaabada caag ah, tuubooyinka caaga ah, giraangiraha caag ah, iwm ..